दुई दिन नेपालसंग होटलमा वार्ता, तेस्रो दिन नेपाल समूहलाई हटाएर स्थायी कमिटी गठन गरेर ओलीले के सन्देश दिन खोजे ? - || वर्णन मिडिया - सूचना तथा समाचारको संवाहक ||
दुई दिन नेपालसंग होटलमा वार्ता, तेस्रो दिन नेपाल समूहलाई हटाएर स्थायी कमिटी गठन गरेर ओलीले के सन्देश दिन खोजे ?
शुक्रबार भएका निर्णय पनि त्यसैको निरन्तरता हो । एकपछि अर्को विवादित र विधानविपरीतका निर्णय गरेर ओलीले पार्टी विभाजन भयो भन्ने सन्देश दिएका छन् ।
२०७८ बैशाख १२, आईतवार ०५:०५:००
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलेदुई दिन वरिष्ठ नेता माधव नेपाल संग मेरियटमा वार्ता गरे । वार्ता विफल भएको भोलीपल्ट शुक्रबार नेपाल समूहमाथी डन्डा चलाएका छन् । जसको असर पार्टी फुटको संघारमा पुगेको छ ।ओलीले पार्टीका वरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल–माधवकुमार नेपाल समूहका नेतालाई छाडेर पार्टी कमिटी पुनर्गठन गर्न थालेका छन् । खनाल–नेपाल समूहका नेताहरुको बुझाईमा ओलीको यो कदम पार्टी विभाजनको घोषणा भएको जनाएका छन् ।
शुक्रबार दसौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकमार्फत ओलीले खनाल–नेपाल समूहका नेताबाहेकको स्थायी कमिटी बनाएर एमालेको आन्तरिक विवादलाई झनै संकटतर्फ मोड्ने ठूलो राजनीतिक कदम चालेका छन् ।ओलीले माओवादी केन्द्रबाट एमाले प्रवेश गरेकालाई जिम्मेवारी दिएर खनाल–नेपाल समूहका नेतालाई जिम्मेवारीविहीन बनाएका छन् ।
ओलीको यो कदमले एमाले विभाजन हुन सक्ने आशंकालाई बल मिलेको छ, किनभने उनले पहिलो पटक पार्टीभित्र एउटा समूहलाई छाडेर कमिटी पुनर्गठन गरेका छन् । जबकि यसअघि उनले महाधिवेशन आयोजक कमिटी विस्तारमा पुरानो कमिटीमै थप गरेका थिए । खनाल–नेपाल समूहका नेताहरुको बुझाईमा ओलीको यो कदम पार्टी विभाजनको घोषणा हो ।नेपाल समूहकै नेताहरुले ओलीले एकपछि अर्को गरी गरेका निर्णयले एमाले विभाजन गरेको सन्देश दिएको बताएका छन् । फागुन २८ गते नै ओलीले एमालेलाई विभाजन गरेका हुन् । शुक्रबार भएका निर्णय पनि त्यसैको निरन्तरता हो । एकपछि अर्को विवादित र विधानविपरीतका निर्णय गरेर ओलीले पार्टी विभाजन भयो भन्ने सन्देश दिएका छन् ।
तर, ओली समूहले भने खनाल नेपाल समूहका नेता फर्केर आए जिम्मेवारी दिन तयार रहेको बताउँदै आएका छन् ।
शुक्रबारको आयोजक कमिटी बैठकले स्थायी कमिटी पुनर्गठन गरेको छ । साथै नेपाल पक्ष बाहेकका महाधिवेशन आयोजक कमिटी सदस्यहको कार्यविभाजन गरेको छ । यस्तै, कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गर्ने चार जनालाई पार्टीको साधारण सदस्य र सांसद पदबाट हटाउने निर्णय गरेको छ । सांसद पदबाट हटाएको निर्णय कार्यान्वयनका लागि कर्णाली प्रदेश सभामा पत्र लेख्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
पार्टी संरचनालाई २ जेठ ०७५ मा फर्काएर २८ फागुन ०७७ पछिका निर्णयलाई खारेज गर्नुपर्ने खनाल–नेपाल समूहले सर्त राखेको बेला ओली एकतर्फी अगाडि बढेका हुन् । ओलीले फागुन २८ मा माओवादीबाट आएका २३ जना नेतालाई केन्द्रीय कमिटीको जिम्मेवारी दिएका थिए । त्यसै दिन उनले पार्टी पदाधिकारीको जिम्मेवारीबाट सबैलाई हटाएर अध्यक्ष र महासचिवमात्रै कायम राखेका थिए ।
यही सिलसिलामा ओलीले चैत्र १६ मा नेपाल र रावललाई पार्टी सदस्यबाटै ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेका थिए । ओलीले नेपाल र रावलपछि घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई पनि ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेका थिए । ओलीको कारबाही प्रक्रिया यहीमात्र रोकिएन, वैशाख ७ मा खनाल र नेपालसहित २७ प्रतिनिधिसभा सांसद र ५ प्रदेश सभा गरी ३२ सांसदलाई स्पष्टीकरण पत्र पठाएका थिए । सबैलाई एमालेको विधान, २०४९ (संशोधन २०७१) र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा भएको व्यवस्थानुसार स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । नेताहरुले यसको जवाफसमेत दिइसकेका छन् । ओलीले २७ सांसदलाई भने थप कारबाही अगाडि बढाएका छैनन् । त्यसको जिम्मा स्थायी कमिटीलाई दिइएको छ ।
उता नेपाल पक्षले चैत्र ४ र ५ गते राष्ट्रिय भेला गरेर देशभर कमिटी विस्तार तथा समानान्तर कमिटी बनाउने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार जिल्लादेखि प्रदेश र जनवर्गीय संगठनमा समानान्तर कमिटी गठन गरेको छ । नेपाल पक्षको राष्ट्रिय भेलाले राजनीतिक प्रस्ताव पारित गरेर ओलीले गरेका गलत कदमविरुद्ध देशभर भण्डाफोर अभियान चलाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
त्यसैबीच पुनर्गठित स्थायी कमिटीमा वामदेव गौतमलाई राखे पनि उनले यसलाई अस्वीकार गरेका छन् । ‘वामदेव गौतमलाई कसैले कुनै कमिटीमा राख्दा खुसी हुनुपर्ने, हटाउँदा दुखी हुनुपर्ने अवस्था होइन । म नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित आधिकारिक उपाध्यक्ष हो । पदाधिकारी खारेज गर्ने फागुन २८ को बैठक र निर्णय अवैधानिक हो,’ गौतमले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।